August 2015 – Gentleman Magazine
သငျ မြားနပေါသလား (အမြိုးသားကနျြးမာရေး) သင် လက်နဲ့ အာသာဖြေဖျောက်ပါသလား?? ဘယ်နှခေါက်ပါလဲ?? တစ်ပါတ် နှစ်ခါလား?? တစ်ရက် နှစ်ခါပါလား?? သင် ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ အချိန်ကို သင့် ခေါင်းထဲမှာ မှတ်ထားပြီး ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အဲဒါ ထက် ပိုလာရင်တော့ သင့်ကိုယ်သင် များနေသလားလို့ စိုးရိမ်မိလာမှာပါ။ သတင်းကောင်းကတော့
Cyber Dating (အွန်လိုင်းချစ်သူ)
သင် Online မှာ တွေ့ရသူတစ်ယောက်ကို ချစ်နေသလို ခံစားရပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် နှစ်ယောက်တူတူ အပြင်မှာ အချိန်ဖြုန်းမကြည့်ဖူးမချင်း သင် သေချာ မသိနိုင်ပါဘူး။ အခုခေတ်သစ် ယဉ်ကျေးမှုမှာ ကျွန်တော်တို့ဟာ အချစ်ကို အသင့် ရရှိနိုင်ပေမယ့် အဲဒါက ရေရှည်ခံပါရဲ့လား။ အင်တာနက်ဟာ ချိန်းတွေ့ခြင်း၊ လက်ထပ်ခြင်းနဲ့ ဆွေမျိုးတော်ခြင်းတွေကို